Inhloko ZeNdaba Mpalakazi 02, 2020
IBulawayo lokhe ihamba phambili ngenani labantu abaleCOVID 19, njalo izolo kuphela kulabantu abangamatshumi amahlanu lanhlanu- 55 abatholakale belayo edolobheni leli. Idolobho lonke lilabantu abedlula amakhulu amahlanu-516 abagulayo okwamanje. Uphenyo olwenziwe ngabe I Am For Bulawayo Fighting COVID 19 luveza ukuthi uzulu koBulawayo kasazihluphi ngokuqgoka ama Mask njalo akasalandeli iziqondiso zokuvikela kuCOVID 19.
Lanxa uhulumende esithi ukhathazekile ngodaba lokuqansa kwenani lezifundi esezitholakala zilalomkhuhlane we COVID-19 ngemva kokuvulwa kwezikolo, uthi kaziyi kuvalwa njengalokho okuhlezi kukhankaselwa ngabanengi okubalisa ababalisi.
EleBotswana lithi lima ngesinqumo salo sokuvula imngcele lanxa umkhuhlane we COVID-19 ukhanya umemetheka ngamandla phakathi, laphandle kwelizwe. Leli lizwe lithi lithethe wonke amanyathela ukubona ukuthi izeluleko zonke ezokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane lo, ziyalandelwa emngceleni yonke evulwe ngoLwesibili.
Umqeqetshi weqembu le FC Platinum uNorman Mapeza uthi abadlali bakhe kumele bakhuphule izinga lokudlala lapho abazadibana khona leqembu lase Mozambique ele Costa Dol Sol, kuhlandla lesibili lomdlalo we preliminary round eyomncintiswano we CAF Champions League ozaqhutshelwa enkundleni ye National Sports ngoMgqibelo.
Ku Livetalk namhlanje kuhlelo “Diaspora Forum” sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala beleCovid 19, ukuvulwa kwemingcele yeZimbabwe lemazweni angomakhelwane kanye lokwenzakala eMelika nemva kokhetho lokudinga umongameli.